Are Wiricheya Inosimudza Inokodzera Yekugara Chinangwa
hwiricheya maLifts akakosha pakushandisa pekugara sezvo vachipa mukana wakasununguka uye nyore kupinda kuimba yemuviri remara kana vanhu vakura vanogona kunge vaine nguva yakaoma navo kufamba voga. Nekugara hwiricheya kusimudza, vanogona kutenderera masitepisi uye kuwana kukudzwa kukuru mukuvimba kwekuwana kwavo kuzvimiririra. hwiricheya malifts eimba anouya akasiyana akasiyana macompact uye ane fashoni magadzirirwo ayo anowirirana zvakakwana nemushongedzo wemba yako. Inowanikwa mumhando dzakasiyana siyana senge yakamira mapuratifomu anosimudza, anotakurika uye akarerekera hwiricheya malifts akakwana ekunze nekushandisa mukati.
Hydraulic kana Pressure Zvikamu
Iwe unogona kuwana yakakura inotaridzika yakakombama kana yakatwasuka masitepisi anosimudza mune akasiyana mamodheru uye mhando. Ivo vanouya mune maviri anoshanda modes hydraulic uye emagetsi emagetsi. Hydraulics inoshandiswa kusimbisa iyo hydraulic mamodheru uye yakanaka munzvimbo dzisina magetsi. Ivo vakanyarara kwazvo uye vanopa mukana wakasununguka uye wakasununguka kuwana. Izvo zvakare zvakareruka kuisa. Magetsi anosimudzwa anosimudza anopa zvakawanda kuchinjika uye anodhura. Unogona kugadzirisa uye gadzirisa izvi kufamba zvishandiso kune zvaunoda chaizvo. Ivo vane mapuratifomu akasimba uye vanogona kugadzirisa hwiricheya yemhando dzakasiyana uye anokwanisa kunyange kugadzirisa simba mavhiripu, mukuru mavhiripu, vana mavhiripu nemitambo mavhiripu.
Kuchengetedzeka Zvimiro zvekugara hwiricheya Lifts
Mazhinji makuru ekuchengetedza maficha ari mukati mekugara hwiricheya anosimudza. Zvinosanganisira ma sensors anonyanya kutarisisa kune zvinhu zvinogona kunge zvichivharira nzira yacho. Kana chirahwe chikawanikwa, ma sensors anomisa ipapo ipapo kusimudza iyo inodzivirira chero kukuvara kune iyo yekusimudza kana kugona mune chete kune mushandisi. Mazhinji mapuratifomu ane asina-kutsvedza pamusoro dhizaini iyo inodzivirira mushandisi kubva kutsvedza. hwiricheya masitepisi anosimudza zvakare anosanganisira yakasarudzika remote control inoita kuti kushanda kuve nyore. Kudzivirira kusabvumidzwa kwekushandisa kiyi kiyi inosanganisirwa. Zvimwe zvekuchengetedza maficha zvakanyorwa pano: • Anti-skid pamusoro • Audio yekuona alarm system • otomatiki huviri kuwana ramp • Anogara achimanikidza kudzora mapfundo • Electro-mechanical braking system ine mota
Mamwe Bhatiri Akabatsirwa hwiricheya Companies
Usati watenga a hwiricheya simudza unoda kuziva zvaunoda. Kutanga kwakanaka kungave kwekutsvaga kuti ndeapi mamodheru, vagadziri nevatengesi varipo. Vamwe vanogadzira zvigadzirwa vanosanganisira Savaria, Thyssenkrupp Access uye Bruno. Kana iwe uchiri kuda rumwe rubatsiro, unogona kukumbira nyanzvi kubva kumutengesi uyo anogona kukubatsira kusarudza iyo hwiricheya kukwira masitepisi iyo yakanakira imba yako.
Ndokumbirawo zadza fomu pazasi kuti ugamuchire ruzivo maererano nekubvunza kwako. Unogona kutipa runhare ku 1-626-581-2235
Top 10 hwiricheya Lifts
Iwo Akanaka Kukwirisa Simudza Makambani
Kugadzirira Kwepamba uye Kuchengetedza
Kana mubereki wako aine kufamba nyaya uye inoda rubatsiro rwetsvimbo yekufamba, Walker, kana wiricheya, ipapo unogona zvakare kuda kufunga nezvekuisa masitepisi mune yako imba (kana ivo vachigara newe) kana mumba mavo. Masitepisi anosimudza (anozivikanwawo sechigaro anosimudza) tendera vashandisi kugara zvakanaka pachigaro chinovatora kukwira nhanho kushandisa kukwira masitepisi senzira. Sekureva kweVatengi Gweta, makambani gumi epamusoro anosimudza masitepisi eHarmar, AmeriGlide, Improvement Center, Handicare, Stannah, 101 kufamba, Kukwira, Acorn, Bruno, uye EHLS. Dzidza zvakawanda nezve imwe neimwe yemakambani uye masitepisi anoshanda sei pazasi.
Chii chinonzi Stairlifts?
Masitepisi, sezvavanonzwika, inzira iri nyore kune avo vane kufamba nyaya dzekunzvenga izvo zvinogona kunetsa zvinonetsa masitepisi. Masitepisi ane nzira yakasungirirwa pamadziro ematanho uye cheya ine mota yakanamatira panzira. Sachigaro chigaro chakachengetedzeka chinokutora nekukwira nhanho.
Zvakare, magiya ane mota (anofambiswa nesimba) anofambisa chigaro nekumhanya kwakakodzera apo mutyairi akasungwa zvakanaka. Y
Pamusoro pezvo, iwe zvakare uchave nekushandisa 'yekufona uye kutumira' bhatani mune chiitiko kana mumwe munhu achida kurishandisa.
Anokwira nhanho anopa rusununguko uye mukana kune izvo zvimwe zvaisazokwira kumusoro kana kuzviita nenjodzi yavo.
Mhando dzeStair Lifts Dzinowanikwa
Mhando nhatu huru dzematanho anosimudza pamusha ndeaya; yakananga masitepisi anosimudza, yakakomberedzwa masitepisi anosimudza, uye yekunze masitepisi anosimudza.
Straight kukwira anosimudza - Yakagadzirirwa seti yemasitepisi inoenda yakananga kune yechipiri nyaya kana yakananga pasi kune yepasi kana yepazasi nhanho. Njanji dzakajairwa dzinoshandiswa uye iyo yekumisikidza nguva inowanzo kuve shoma.
Kukombama Stair anosimudza - Inodikanwa kune kunyorera uko kune yakakombama, kukotamisa kana kumhara pakati-nzira kumusoro kana pasi masitepisi. Kuiswa kwezvikwiriso zvakakombama kunosanganisira kuvaka tsika njanji kukodzera yako yakasarudzika masitepisi uye inogona kutora nguva yakareba kuisa.
Outdoor kukwira anosimudza - Inowanzoiswa pamavharanda, patio uye madhiri, kana kubatsira kufamba munzvimbo dzisina kukwana dzinotungamira kune pier. Kugadziriswa kunogona kudikanwa zvichienderana nekuti masitepisi acho akatwasuka kana kukombama. Masitepisi ekunze akagadzirwa kuti akwanise kumira zvinhu kuburikidza nekushandiswa kwemahara-giredhi vinyl uye anovhara mamiriro ekunze.
Yakajairika Kukwira Simudza Zvimiro
Makambani mazhinji ekusimudza masitepisi anopa anotevera maficha seyakaenzana nemhando dzadzo kana seimwe yekuwedzera-on kana kusimudzira.
Kupeta Seat & Footrest - Yakagadzirirwa kubatsira kudzikisira huwandu hwenzvimbo iyo staircift inotora painenge isiri kushandiswa. Mimwe mienzaniso inopa sarudzo yesimba iyo inopeta zvakapetwa tsoka kana chigaro chasimudzwa.
Swiveling Seat - Inotendera mushandisi kutenderedza chigaro kure nematanho akavhurika yekubuda kwakachengeteka zvakanyanya kubva kune masitepisi.
Adjustable / Customizable Chairs - Yekuwedzera nyaradzo muchimiro cherupo padding, chinogadziriswa chigaro kukwirira uye armrest upamhi inoita kuti ufambe zvakanyanya kutsetseka.
Chigaro Bhandi uye Chengetedzo Sensor - Mabhande epamotokari-giredhi anobatsira kuchengetedza vatasvi zvakachengeteka pachigaro apo kukwira kwemasitepisi kuri kufamba. Uye maseru ekuchengetedza anogona kuona zvinhu pamatanho izvo zvingavhiringidze kukwira kwemasitepisi.
Remote Controls - Inogona kushandiswa otomatiki "kufona kana kutumira" masitepisi kusimudza nekudzika masitepisi achibvumira vashandisi vazhinji kushandisa kukwirisa masitepisi.
Chii Chaunofunga Nezve Kuongorora Iyo Stair Simudza Kambani
Funga zvinotevera kana uchiongorora kambani yega yega uye kuona kuti ndiyo yakakwira-unhu chigadzirwa chaunoda:
Ndeupi mutengo wemutengo iwe wauri kuda kushandisa kukwira masitepisi?
Iyo kambani inopa chirongwa chekubhadhara here?
Ndeapi mhando dzakasiyana dzemasitepisi dzinogadzirwa nekambani?
Iwe unoda here yekumusoro kana yekunze nhanho?
Makore mangani warandi iyo kambani ichapa?
Ndezvipi zvinhu zvekuchengetedza zvinosanganisirwa muchigadzirwa?
Ndeye staircift yekuzvisarudzira-kana inoda hunyanzvi kumisikidzwa?
Anokwira sei anobata kudzimwa kwemagetsi?
Inokwira nhanho bhatiri-inoshandiswa kana magetsi?
Iwe unoda kutenga kana kubvarura nhanho?
Naizvozvo, paunopindura mibvunzo iri pamusoro, funga nezvese zviripo nezvazvino zvinodiwa zvemudiwa wako achembera. Iva nechinangwa nekutsvagisa kwako uye kuongorora kweimwe neimwe yemakambani. Kuva mutengi ane ruzivo kuchakuisa iwe mune yakanakisa chinzvimbo chinogoneka.
Iwo Ekumusoro gumi Kukwirisa Simudza Makambani
Iwo makwikwi eanosimudza makwara akarongwa pazasi ndiwo mavambo ekuti iwe uongorore uye woongorora imwe neimwe kuti uwane yakanakira sarudzo kwauri. Vagadziri vakasiyana veanosimudza masitepisi vachapa mhando dzakasiyana kuzadzikisa zvaunoda. Hauna chokwadi pekutangira?
Mhando dzeStairlifts Dzinowanikwa
Base Base Range yeiyo Yakarurama Stairlifts
Base Mutengo Range yeakakomberedzwa Stairlifts
Bruno Yakarurama, Yakakombama & Kunze $ 3,200 kuti $ 5,200 $10,500
handicare Yakarurama, Yakakombama & Kunze $ 2,600 kuti $ 3,700 $ 6,200 kuti $ 8,600
Stannah Yakarurama, Yakakombama & Kunze $ 3,000 kuti $ 5,700 $ 12,000 kuti $ 15,000
Harmar Yakarurama, Yakakombama & Kunze $ 2,200 kuti $ 4,000 $14,000
AmeriGlide Yakarurama, Yakakombama & Kunze $ 1,700 kuti $ 2,100 $8,200
101 Kufamba Straight $ 3,400 kuti $ 3,500 Kwete
Kukwira Masitepisi Kukwira Yakarurama, Yakakombama & Kunze $ 2,200 kuti $ 4,000 $ 6,2000 kuti $ 14,000
Acorn Kukwira Kunosimudza Yakarurama, Yakakombama & Kunze Kumba-kubvunza kunodiwa pamitengo Kumba-kubvunza kunodiwa pamitengo
EHLS, iyo Lifeway Mobility Kambani Yakarurama, Yakakombama & Kunze $ 2,200 kuti $ 4,000 $ 6,200 kuti $ 14,000
Savaria Yakarurama & Yakakombama $ 2,500 kuti $ 3,000 $8,800